वर्क फ्रम होममा भिडियो कन्फरेन्सको समय यसरी देखिनुहोस् पफेक्ट
एजेन्सी, २ वैशाख । कोरोना भाइरसले हाम्रो जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । अहिले विश्वका अधिकांश कार्यलयहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई वर्क फ्रम होमबाट काममा खटाइरहेको अवस्था छ । यसबीच अहिले भिडियो कन्फरेन्सले ठूलो चर्चा पाईरहेको छ ।
तर भिडियो कन्फरेन्समा कतिपयले प्रोफेसनल लुक्स र प्रस्तुती दिन सकिरहेका हुँदैनन् । आज हामी तपाईलाई भिडियो कलमा कसरी प्रोफेसनल लुक्स र प्रस्तुतीकरण दिने भन्ने बारेमा केही टिप्सहरु दिदैँछौ ।
१. प्राकृतिक प्रकाशको प्रयोग
भिडियो कन्फरेन्सको समयमा झ्याल ढोकाहरु खुल्ला राख्नुहोस् र प्राकृतिक प्रकाशको प्रयोग गर्नुहोस् । झ्यालबाट प्राकृतिक प्रकाश आईरहेको छ भने झ्यालपट्टि आफू बसेर क्यामेरा अगाडी नराख्नुहोस् यसले तपाईको अनुहारमा एन्टी लाइट परेर अँध्यारो देखिन्छ ।
२. फिल्टरको प्रयोग गर्नुहोस्
क्यामेरामा धेरै फिल्टर भयो भने अनुहार सफा देखिन्छ । यसकारकाण सधैं फिल्टर भएको क्यामेरा प्रयोग गर्नुहोस् ।
३. सही बेस मेकअप गर्नुहोस्
घरबाटम भिडियो कन्फ्रेन्स गर्दा सही मात्रामा बेस मेकअप गर्नुहोस् । ताकी अनुहार टल्किने समस्या नआओस् । बेस लगाउन अघि अनुहारमा मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नुहोस् साथै कलर करेक्सन गर्ने क्रिम पनि प्रयोग गर्नुहोस् । आँखाको मुनि कालो घेरा छ भने कंसिलर लगाएर त्यसलाई लुकाउनुहोस् ।
४. आईस्याडोको प्रयोग गर्नुहोस्
अधिकत समय भिडियो कलमा आँखा थाकेको जस्तो देखिन्छ । यदि तपाईलाई पनि यस्तो समस्या छ भने आँखाको माथि थोरै आईस्याडो लगाउनुहोस् । यसले अनुहारलाई ठिक गर्छ ।